RASMI: Xiriirka UEFA oo ku dhawaaqay goolasha u sharraxan goolkii ugu quruxda badnaa isbuucaan Champions League – Gool FM
Haaruun September 19, 2019
(Yurub) 19 Sebt 2019. Habeen hore oo Talaado ahayd iyo xalay oo Arbaco ahayd ayaa la ciyaaray kulamadii koowaad ee heerka guruubyada Champions League iyadoo natiijooyin aan la filayn laga soo calaamadeeyey.
Kooxda difaacanaysa Champions League ee Liverpool iyo kooxda soo qaaday Europa League ee Chelsea ayaa guuldarro la kulmay si la mid ah Real Madrid.
Kooxaha Dortmund, Barcelona, Atletico iyo Juventus ayaa min hal dhibic helay kaddib markii ay barbaro galeen kulamaddii ay ciyaareen waxaana kooxaha guulaha gaaray ay hoggaaminayaan Bayern Munich, PSG iyo Manchester City.
Haddaba xiriirka kubadda cagta qaaradda Yurub ee UEFA ayaa ku dhawaaqay afar ciyaaryahan ee ku tartami doona abaal-marinta goolkiisii ugu fiicnaa ee isbuucan laga dhaliyey Champions League.
Goolasha u sharraxan goolka isbuuca Champions League waxaa ka mid ah goolkii uu xalay Cuadrado ka dhaliyey kooxda reer Spain ee Atletico Madrid & Goolkii labaad ee uu ciyaaryahanka PSG ee Angel di Maria ugu shubay Los Blancos.
Sidoo kale waxaa goolasha sharraxan ka mid ah midkii uu Alvarez u dhaliyay kooxdiisa Ajax kulankii ay 3-0 kaga adkaadeen Lille iyo weliba goolkii weeraryahanka reer Brazil iyo Tottenham, Lucas Moura ka dhaliyay kulankii ay barbaraha 2-2 la galeen Olympiacos.